Burma Partnership » On World Refugee Day Burma Government and International Community Must Commit to Respecting Voices and Rights of Burma’s Refugees
By Karen Women Organization • June 20, 2015
Since 2011, there have been rumors and counter-rumors regarding the repatriation of Burma’s refugees. The Government’s rhetoric of transition to democracy, the signing of individual preliminary ceasefire agreements – notably with the Karen National Union (KNU) in 2012 – and the continuing peace talks with ethnic armed organizations have further fueled the discussion of repatriation. These events have led to the decrease in funding and assistance from international donors. This, along with the restriction on movements, is deeply affecting the refugees’ basic daily needs and livelihood. While the people of Burma have not observed the genuine shift towards democracy that dominates the rhetoric both inside and outside of the country, noramove towardsagenuine federal union as promised by the Government, the discussion of repatriation has continued without diverse participation of the refugees and the Community Based Organizations (CBOs) working with the refugee community.
The conditions that led refugees to flee in the first place have yet to be resolved, as initial ceasefires have proven to be fragile and regularly breached. In ceasefire areas, an increased presence of Burma Army troops, in terms of both numbers of personnel and infrastructure, threaten the lives of those who continue to live in fear of conflict. In northern Burma, over 120,000 people have been displaced since 2011 due to the renewed conflict between the Burma Army and the Kachin Independence Army, after the Burma Government breached the 17-year ceasefire agreement. In Karen State, 2,000 people fled to the border in September 2014 as fighting broke out between the Democratic Karen Benevolent Army and the combined force of the Burma Army and the Border Guard Force. As ethnic communities seek refuge from the Burma Army’s relentless offensives, there is no guarantee that fighting will not occur in or spread to locations where refugees may return.
In addition, civil society groups have documented over 100 cases of gang- rape, rape and sexual assault since 2010, particularly in conflict areas committed by the Burma Army with impunity. The Burma Government has failed to address these issues of sexual violence one year after the signing of the Declaration of Commitment to End Sexual Violence in Conflict. Their lack of meaningful action is tantamount to being complicit in the perpetration of these crimes. Perpetrators must be held accountable or these human rights abuses will continue with impunity and refugees will once again be exposed to these crimes upon their return.
A genuine peace process must include structural changes that guarantee the rights and equality of ethnic people throughapower sharing agreement between the Burma Government and ethnic armed organizations, which has yet to commence. While the recent peace talks have observed positive developments in the unification and solidarity of the ethnic armed organizations, Burma is still far from achieving the signing of the much-touted nationwide ceasefire agreement (NCA). Premature repatriation under these current conditions will lead to further suffering for refugees who have already experienced persecution and human rights abuses by the Burma Army.
Furthermore, the initial ceasefires and the ongoing peace talks have increased economic investments and development projects that leave ethnic communities vulnerable to exploitive land expropriation. Without adequate mechanisms to prevent private entities and government backed corporations from confiscating land and initiating development projects without genuine and inclusive consultations, refugees will be exposed to displacement andamyriad of human rights violations upon their return. There should beamoratorium on all mega development projects while national laws and mechanisms are revised to fit international standards before refugees can return with the means to provide for their livelihood and to live in dignity.
Refugee return must be truly voluntary and based on durable solutions that are in line with international human rights standards and humanitarian laws that ensure their safety and dignity. Meaningful consultations and diverse participation of refugees and CBOs working with the refugee community in the planning and preparedness of their return is key to their sustainable return. It is vital that women are seen as equal stakeholders, and their participation in the preparation and implementation of refugee return must be ensured. Genuine and timely consultation with the refugees as primary stakeholders is fundamental in deepening the trust and improving communication with the refugee community, paving the way for the provision of clear information as regards to their future. There must be genuine and regular consultations in identifying possible relocation sites as refugees can provide expert local knowledge on this matter.
The timing for refugee return will not be right until the conditions which have led the refugees to flee Burma over the past 30 years are resolved. If Burma hopes to achieveagenuine sustainable peace, it is essential that the voices of refugees are heard and their rights are recognized and respected.
We recommend the Burma Government to:
Allow meaningful and full participation of refugees and CBOs working with the refugee community in the preparedness planning for return;
Protect the safety and dignity of women by ensuring the participation of women in the preparation and implementation of refugee return;
Hold genuine and timely consultations with refugees to determine the timing and conditions of their possible return;
Participate in the peace process in good faith by immediately ceasing all offensives and withdrawing all troops stationed in ethnic areas, honor original ceasefire agreements, and begin political dialogue prior to the discussion of repatriation;
Prioritize the prevention of sexual violence and hold all perpetrators accountable to the full extent of the international law in accordance with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and the Declaration of Commitment to End Sexual Violence in Conflict;
Placeamoratorium on all mega projects, set up protection mechanisms to safeguard the peoples’ land from confiscation, and undertake comprehensive investigation and action regarding land disputes;
Ensure that eventual refugee repatriation is conducted in safely and with dignity by disclosingaclear plan to accede to the Anti-Personnel Mine Ban Convention and implement demining activities first, while strengthening mine-risk education programs;
We recommend international governments, UNHCR, donors and all relevant parties to:
Ensure that refugees are included in all planning and preparation for return, and that they are genuinely consulted in the timing and location of their return;
Provide aid and assistance that meets the refugees’ basic daily needs;
To respect the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees and international human rights standards in regards to refugee return.
All Arakan Students’ and Youths Congress
Australia Karen Organization
Ayar West Development Organization
Chinland Natural Resources Watch Group
Creative Home ( Phan Tee Eain)
Farmer Right & Development Organization
Gender and Development Initiative- Myanmar
Gender Equality Network ( GEN)
Green Future Yenangyaung
Info Birmanie ( France)
Khit Thit Lu Nge
Kyauk Kyi Development Watch Group
Mayway Region Farmer Union
Mayway Youth Network
Management & English Learning Center
Myanmar Institute of Peace and Security
Natural Sever Community
Organic Agro & Farmer Affair Development Group
People’s Progressive Front
Social Care Volunteer Group
The Free Burma Campaign ( South Africa)
Upper Burma Farmer Union League
Women Initiatives Network for Peace
Women’s Organizations Network
Women, Peace and Security Initiative ( WPSI- Myanmar)
Zomi Student Association ( Universities- Myanmar )
Taya Maung, Freelance Consultant
Nan Dah Eh Kler: 085 726 9291 (Burmese and Karen)
Naw Ta Mla Saw: 081 0266738 (English and Karen)
Download the statement in Karen, Burmese and English here.
ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့တွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတို့မှ မြန်မာ့ဒုက္ခသည်များ၏
အသံနှင့် အခွင့်အရေးများကို လေးစားရန် ကတိပြုရမည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးလာပြီး ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်း (၉) ခု၌ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုခံယူနေသော ဒုက္ခသည် ၁၁၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် အတူ ကျွန်ုပ်တို့ သွေးစည်းညီညွတ်စွာ ရပ်တည်နေပါသည်။ ယင်းဒုက္ခသည်များမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာညောင်းနေပြီဖြစ်သည့် စစ်ပွဲ နှင့် ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲကို ထင်ဟပ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး (UNHCR)၊ မြန်မာအစိုးရ၊ နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံးတို့ကို ၁၉၅၁ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်း ရှင်းသဘောတူညီချက်နှင့် ၁၉၆၇ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့အား လေးစားလိုက်နာရန်နှင့် ဒုက္ခသည်အားလုံး၏ အခွင့်အရေးများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အားပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ပို့ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကောလဟလများနှင့် တန်ပြန်ကောလဟလများ ပေါ်ထွက်နေခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီသို့ အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အစိုးရ၏ စကားကြီးစကားကျယ်များ၊ တစ်ဖွဲ့ချင်း ပဏာမအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များ လက်မှတ်ထိုးမှု အထူးသဖြင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၌ လက်မှတ်ထိုးမှု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လုပ်နေမှုတို့သည် နေရပ်ပြန်ပို့ရေးကောလဟလများကို ပိုမိုမီးထိုးပေးခဲ့သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များကြောင့် နိုင်ငံတကာအလှူရှင် များထံမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် အကူအညီများ လျော့ကျခဲ့သည်။ ယင်းအချက်နှင့်အတူ ဒုက္ခသည်တို့၏ သွားလာလှုပ်ရှားမှု များ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုသည်လည်း ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေခံနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို ကြီးကြီး မားမားထိခိုက်နေစေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပကို လွှမ်းမိုးနေသော လေလုံထွားမှုမှအပ စစ်မှန် သည့် ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးကို မတွေ့မြင်ရသေးသလို အစိုးရမှ ကတိပေးထားသည့် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု သို့ ရွေ့ရှားမှုကိုလည်း မတွေ့ရသေးစေကာမူ နေရပ်ရင်းပြန်ပို့ရေး ပြောဆိုဆွေးနွေးချက်များမှာမူ ဒုက္ခသည်များနှင့် ဒုက္ခသည် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း (CBO) တို့၏ နယ်ပယ်စုံပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု မရှိဘဲ ဆက်သွားနေကြသည်။
ဒုက္ခသည်များကို ထွက်ပြေးစေခဲ့သည့် မူလပထမအကြောင်းအချက်များမှာ ဖြေရှင်းဖို့လိုနေဆဲ ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ပဏာမအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးများသည် မခိုင်မာဘဲ ပုံမှန်ဖောက်ဖျက်ခံနေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အပစ်ရပ်နယ်မြေ များတွင် မြန်မာစစ်တပ်များ တိုးများလာမှုမှာ စစ်သည်အရေအတွက်အရသော်လည်းကောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ အရေ အတွက်အရသော်လည်းကောင်း စစ်ပွဲကိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာဖြင့် ယင်းနယ်မြေတွင် ဆက်လက်နေထိုင်သူတို့၏ ဘဝများကို ခြိမ်းခြောက်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် (၁၇) နှစ်ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်အား မြန်မာအစိုးရမှ ချိုးဖျက်ပြီးနောက် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်အကြား အသစ်တဖန် ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် လူပေါင်း ၁၂၀,၀၀၀ ကျော် အိုးအိမ်စွန့် ပြေးခဲ့ရသည်။ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော်ကတစ်ဘက်၊ မြန်မာစစ်တပ်နှင့်နယ်ခြားစောင့်တပ် ပူးပေါင်းအင်အားစုကတစ်ဘက် တိုက်ပွဲများဖြစ်သဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် လူ ၂,၀၀၀ ခန့် နယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ တိုင်းရင်းသားလူထုများက မြန်မာစစ်တပ်၏ အညှာတာမဲ့ထိုးစစ်များမှ လွှတ်ကင်းရာ တိမ်းရှောင်နေကြရသလို ဒုက္ခသည်များ ပြန်သွားနိုင်သည့် နေရာဒေသများသို့ တိုက်ပွဲ များမဖြစ်နိုင် (သို့မဟုတ်) တိုက်ပွဲများပျံ့နှံ့မလာနိုင်ဟု အာမခံချက် မရှိပေ။
ထို့အပြင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အုပ်စုလိုက်မုဒိမ်းကျင့်မှု၊ တစ်ဦးချင်းမုဒိမ်းကျင့်မှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို အရပ်ဖက်လူမှုအသင်းအဖွဲ့များမှ မှတ်တမ်းတင်ကောက်ယူရရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခနယ်မြေများတွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ကင်းစွာဖြင့် ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အမှုများ ဖြစ်သည်။ မြန်မာအစိုးရသည် စစ်ပွဲအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာအကြမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်ရေး ကတိခံဝန်ကြေညာချက်အား လက်မှတ်ထိုးပြီး တစ်နှစ်ကြာသော်လည်း ယင်းလိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ပျက်ကွက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ အလေးအနက်လုပ်ဆောင်မှု မရှိခြင်းသည် ယင်းပြစ်မှုများကျူးလွန်ရာတွင် အလိုတူအလိုပါ အဓိပ္ပာယ်ဆောင်နေသည်။ ကျူးလွန်သူများကို တာဝန်ခံခိုင်း ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက ယင်းလူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုများသည် ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်လျက် ဆက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ဒုက္ခသည်များ ပြန်လာသည့်အခါ၌ ယင်းပြစ်မှုများနှင့် ထပ်မံကြုံတွေ့ရဦးမည် ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းထဲတွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြား အာဏာခွဲဝေရေး သဘောတူညီချက်မှတဆင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တန်းတူမှုကို အာမခံသော ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်မှု အပြောင်းအလဲများ ပါရှိရမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော သဘောတူညီချက်မှာ ရမလာသေးပေ။ မကြာသေး မီက မြန်မာနိုင်ငံမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ၌ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းမှုနှင့် သွေးစည်းမှုပိုင်းတွင် တိုးတက်သည့်ဖြစ်ထွန်းမှုများ တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း အထူးအမွှန်းတင်နေကြသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် (NCA) အား အောင်မြင်စွာ လက်မှတ်ထိုးနိုင်ရန်မှာမူ ဝေးနေသေးသည်။ ဤလက်ရှိ အခြေအနေများအောက်တွင် အချိန်မတန်မှီ နေရပ်ရင်းပြန်ပို့ခြင်းသည် မြန်မာစစ်တပ်၏ နှိပ်ကွပ်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဖောက် ဖျက်မှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးသော ဒုက္ခသည်များအတွက် နောက်ထပ်ဒုက္ခရောက်စေမည်သာ ဖြစ်သည်။
ထိုမျှသာမက ပဏာမအပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုများနှင့် လုပ်နေဆဲငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများက စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကို တိုးမြှင့်လာစေရာ တိုင်းရင်းသားလူထုများမှာ မြေယာသိမ်းဆည်းခံရပြီး သွေးစုတ်ခံရဖို့ ထိခိုက်လွယ် သွားစေသည်။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့် အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပြု ကုမ္ပဏီများက စစ်မှန်ပြီး အများပါဝင်သည့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုများ မရှိဘဲ မြေယာများသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ စတင်ခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် လုံလောက်သည့်ယန္တရားစနစ်များ မရှိသဖြင့် ဒုက္ခသည်များ ပြန်လာသည့်အခါ၌ အိုးအိမ်စွန့်ရမှုနှင်အတူ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတသီကြီးနှင့် ထပ်ရင်ဆိုင်ရဖို့ ရှိနေသည်။ ဒုက္ခသည်များ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရေး နှင့် သိက္ခာရှိစွာ နေရင်းပြန် နိုင်ရေးအတွက် ပြန်မလာနိုင်သေးမီ အမျိုးသားဥပဒေများနှင့် ယန္တရားများကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင် နေသည့်အချိန်တွင် ဧရာမဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကြီးများအားလုံးကို ရပ်တန့်ထားသင့်သည်။
ဒုက္ခသည်များ ပြန်လာခြင်းသည် လုံးဝပင် မိမိဆန္ဒအရဖြစ်ရမည်၊ မိမိတို့၏လုံခြုံဘေးကင်းရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာတို့ကို အာမခံသော နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းများ၊ လူသားချင်းစာနာရေး ဥပဒေများနှင့်ဆီလျော်သည့် တာရှည်ခံ ဖြေရှင်းချက်များအပေါ် အခြေခံရမည်။ နေရပ်ပြန်ရေး စီစဉ်ပြင်ဆင်ရာတွင် ဒုက္ခသည်များနှင့်လည်းကောင်း၊ ဒုက္ခသည်အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း လုပ်ကိုင် နေသည့် CBO များနှင့်လည်းကောင်း အလေးအနက် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ နယ်ပယ်စုံ ကဏ္ဍစုံ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ၎င်းတို့ နေရပ်ပြန်မှု ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူသည့် အကျိုးစီးပွား ပတ်သက်သူများအဖြစ် ရှုမြင်ရန် အဓိကကျပြီး ဒုက္ခသည်ပြန်ရေး ပြင်ဆင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လည်းကောင်း သူတို့၏ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို အာမခံရမည် ဖြစ်သည်။ ဒုက္ခသည်များကို အခြေခံအကျိုးစီးပွား သက်ဆိုင် သူများအဖြစ် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အမှန်တကယ်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်းသည် ဒုက္ခသည်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ယုံကြည်မှုခိုင်မာရေး၊ ဆက်သွယ်မှုတိုးတက်ရေးအတွက် အရင်းခံဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက် ရှင်းရှင်း လင်းလင်းပေးနိုင်ရန် လမ်းခင်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်စရာရှိသည့် ပြန်လည်အခြေချနေရာများ ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ရာတွင် ဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် ဒေသန္တရဗဟုသုတ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပေးနိုင်သဖြင့် စစ်မှန်သည့်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုများ ပုံမှန်ရှိရပါမည်။
ဒုက္ခသည်များကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ် (၃၀) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးလာစေခဲ့သည့် အကြောင်းအချက်များ မပြေလည်သေး သရွေ့ ၎င်းတို့အိမ်ပြန်ဖို့ အချိန်တန်ဦးမည် မဟုတ်ပေ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် စစ်မှန်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး အောင်မြင်ထမြောက်လိုပါက ဒုက္ခသည်တို့၏အသံများ နားထောင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများအား အသိအမှတ်ပြု လေးစားရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပေသည်။
မြန်မာအစိုးရအား ကျွန်ုပ်တို့မှ အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြုတိုက်တွန်းပါသည် –
နေရပ်ပြန်ရေး စီစဉ်ပြင်ဆင်ရာတွင် ဒုက္ခသည်များ၊ ဒုက္ခသည်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အလုပ်လုပ်နေသည့် CBO တို့အား အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနှင့် အပြည့်အဝပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးပါ။
ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရေး ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အာမခံခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သိက္ခာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ။
ဒုက္ခသည်များနေရပ်ပြန်မှု ဖြစ်နိုင်ရေးအတွက် အချိန်အခါနှင့် အခြေအနေများကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ဒုက္ခသည်များနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အမှန်တကယ်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပါ။
ထိုးစစ်အားလုံး ချက်ခြင်းရပ်စဲပြီး တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများ၌ တပ်ချထားသော တပ်ဖွဲ့အားလုံး ရုပ်သိမ်းခြင်းဖြင့် ငြိမ်း ချမ်းရေးလုပ်ငန်းကို စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ၊ နဂိုမူလအပစ်ရပ်သဘောတူညီချက်များကို လေး စားတန်ဖိုးထားပါ၊ နေရပ်ရင်းပြန်ရေး မဆွေးနွေးမီ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု စတင်ပါ။
အမျိုးသမီးများအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုအသွင်အားလုံး ဖျက်သိမ်းရေး ကွန်ဗင်းရှင်းသဘောတူညီချက်နှင့် ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ အဆုံးသတ်ရေး ကတိပြုကြေညာချက်တို့နှင့်အညီ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပါ၊ ကျူးလွန်သူများအားလုံးကို နိုင်ငံတကာဥပဒေအတိုင်း အပြည့်အဝ တာဝန်ခံခိုင်းပါ။
ဧရာမစီမံကိန်းကြီးများအားလုံးကို ရပ်တန့်ထားပါ၊ ပြည်သူလူထု၏ မြေယာများ သိမ်းဆည်းမခံရအောင် ကာကွယ်ပေး သည့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယန္တရားများ ထူထောင်ပါ၊ မြေယာအငြင်းပွားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံခြုံငုံမှုရှိ သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်ပါ။
လူသတ်မိုင်းဗုံးပိတ်ပင်ရေးကွန်ဗင်းရှင်းသဘောတူညီချက်ကို လက်ခံလိုက်နာရန် ရှင်းလင်းသည့်အစီအစဉ် ဖော်ပြပေး ခြင်းဖြင့် ဒုက္ခသည်များအား နောက်ဆုံးတွင် နေရပ်ရင်းပြန်ပို့ရေးကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနှင့် သိက္ခာရှိစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အာမခံပါ၊ မြေမြှုပ်မိုင်းဖယ်ရှားရေးကို ပထမဦးစွာ အကောင်အထည်ဖော်ပါ၊ တဘက်မှလည်း မိုင်းအန္တရာယ်ပညာပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ခိုင်မာအားကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ UNHCR ၊ အလှူရှင်များနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံးတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြု တိုက်တွန်းပါသည် –
နေရပ်ပြန်ရေးအတွက် စီစဉ်မှုနှင့် ပြင်ဆင်မှုအားလုံးတွင် ဒုက္ခသည်များ ပါဝင်ဖို့ အာမခံပါ၊ ၎င်းတို့ ပြန်ရေးအတွက် အချိန်အခါရွေးခြင်း၊ ပြန်မည့်နေရာရွေးခြင်းတို့တွင် ၎င်းတို့အား အမှန်တကယ်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းဖို့လည်း အာမခံပါ။
ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေခံနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ ပြည့်မှီနိုင်မည့် အကူအညီအထောက်အပံ့များပေးပါ။
ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၁၉၅၁ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းသဘောတူ ညီချက်နှင့် ၁၉၆၇ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့် အရေး စံနှုန်းများကို လေးစားလိုက်နာပါ။
Tags: 1951 Convention relating to the Status of Refugees, 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, Ceasefire Agreement, Democratic Karen Benevolent Army, Karen National Union, Karen Women Organization, Nationwide Ceasefire Agreement, Refugees, Sexual Violence, UN High Commissioner for Refugees
This post is in: Displacement, Ethnic Nationalities, Human Rights, Women